Izindaba - Iyini ibhola elinemijelo ejulile?
Akuwona wonke amabhere ebhola afanayo. Izinhlobo ezahlukahlukene zemiklamo zenzelwe ukuhlangabezana nezidingo ezithile, ngakho-ke uma ungeyena unjiniyela noma umphakeli (noma ngabe wenza kwesinye isikhathi), akulula ngaso sonke isikhathi ukukhetha leyo evumelana kangcono nezidingo zakho.
Thatha enye yezinhlobo zokuthwala ezisetshenziswa kakhulu - amabombo we-deep groove ball. Ukuthi isetshenziswa kaningi akusho ukuthi ilungele uhlelo lwakho lokusebenza oluthile. Ake sibheke imizuzu embalwa elandelayo ukuthola eminye imininingwane.
Ngabe amabhola we-groove ajulile akhethe kahle namhlanje? Xhumana nathi namuhla nganoma yimiphi imibuzo.
Izici zebhola le-groove elijulile
Ukuthwala ibhola okujule kakhulu kulungele ukuphatha umthwalo omkhulu nejubane lokugijima okusheshayo. Bangakwazi ukumelana nemithwalo ye-radial nemithwalo ekhawulelwe ye-axial (noma ye-thrust). Ngamafuphi, kungukukhetha okuhle ukuthi ibhola elijulile le-groove lizoba nengcindezi efakwe ezinhlangothini zombili zokuthwala kusuka kushaft (i-radial) kanye nas shaft (i-axial).
Nayi i-athikili enhle echaza umehluko phakathi kwemithwalo ye-radial ne-axial thrust.
Izinzuzo zebhola le-groove elijulile
Ngaphezu kokuguquguquka, amabombo we-groove ball ahlinzeka ngezinzuzo eziningi, kufaka phakathi:
· ukusebenza buthule ne-torque yokuqala encishisiwe
· izinketho eziningi zokugcoba / zokugcoba
Izidingo ezisezingeni eliphansi zesevisi noma zesondlo
Ukusetshenziswa okujulile inkatho ibhola eziveza
Manje njengoba usuqonda kangcono ukuthi ayini amabhere e-groove deep, nalu uhlu lwezimboni ngokuvamile ezithembele kuzo:
· Ukulungiswa kokudla
· amathuluzi omshini
· Icubungula izinsiza
· ujantshi nezokuthutha
Izixazululo ezenziwe ngezifiso ziyatholakala